Allavsoft Video Downloader Converter v3.15.3.6527 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Computer software Converter Downloader PC Downloader Allavsoft Video Downloader Converter v3.15.3.6527
Allavsoft Video Downloader Converter v3.15.3.6527
Maung Pauk at 4:52:00 PM Computer software, Converter, Downloader, PC Downloader,
Facebook, Youtube, Dailymotion, eHow စတဲ့ Video တင်ထားတဲ့ဆိုဒ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကနေ ဗွီဒီယိုတွေကို Download လည်းလုပ်၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Format ကိုလည်းတစ်ပါတည်းပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ Allavsoft Video Downloader Converter ဖြစ်ပါတယ်.. အသုံးများတဲ့ MP4, AVI, WMV, MOV, MPEG-1, MPEG-2, VOB, ASF, RMVB, DV, TS, Apple ProRes, WebM, FLV, OGV စတဲ့ Video Format တွေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရုံမက ultra high definition (4K), 3D video, HD 2k, HD 1080p, HD 720p, and stand definition 480p, 360p, နဲ့ 240p စတဲ့ Resolution မျိုးစုံကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်.. (သို့သော် နဂိုရှိမှ နဂိုင်းထွက်ဆိုသလို အစကတည်းက အရည်အသွေးမကောင်းရင်တော့ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Resolution လည်း သိပ်တော့ ကောင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူး..)၊ အသုံးပြုနည်းကလည်း လွယ်ပါတယ်.. Paste video URL Here ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဗွီဒီယိုလင့်ကိုဖြည့်. တခါတည်း Format ပါပြောင်းပြီးသားလိုချင်ရင် Automatically Convert to ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ခြစ်ပြီး ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ Format ကိုရွေး.. Download Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ..
2. Setup နဲ့ Install လုပ်ပြီးကီးတောင်းလာရင် ကီးဂျင်ကို ဖွင့်ပြီး Generate လုပ်ရလာတဲ့ကီးကိုဖြည့်.. နာမည်နေရာမှာ ကြိုက်တဲ့နာမည်ဖြည့်.. Activate လုပ်လိုက်ရင် ၃၉.၉၉ ဒေါ်လာတန်ကို အလကားသုံးနိုင်ပါပြီ...
Facebook, Youtube, Dailymotion, eHow စတဲ့ Video တငျထားတဲ့ဆိုဒျပေါငျး ၁၀၀ ကြျောကနေ ဗှီဒီယိုတှကေို Download လညျးလုပျ၊ ကိုယျကွိုကျတဲ့ Format ကိုလညျးတဈပါတညျးပွောငျးပေးနိုငျတဲ့ Allavsoft Video Downloader Converter ဖွဈပါတယျ.. အသုံးမြားတဲ့ MP4, AVI, WMV, MOV, MPEG-1, MPEG-2, VOB, ASF, RMVB, DV, TS, Apple ProRes, WebM, FLV, OGV စတဲ့ Video Format တှကေို ပွောငျးလဲပေးနိုငျရုံမက ultra high definition (4K), 3D video, HD 2k, HD 1080p, HD 720p, and stand definition 480p, 360p, နဲ့ 240p စတဲ့ Resolution မြိုးစုံကိုလညျး ပွောငျးလဲပေးနိုငျပါတယျ.. (သို့သျော နဂိုရှိမှ နဂိုငျးထှကျဆိုသလို အစကတညျးက အရညျအသှေးမကောငျးရငျတော့ ပွောငျးလဲလိုကျတဲ့ Resolution လညျး သိပျတော့ ကောငျးလာမှာမဟုတျပါဘူး..)၊ အသုံးပွုနညျးကလညျး လှယျပါတယျ.. Paste video URL Here ဆိုတဲ့နရောမှာ ဗှီဒီယိုလငျ့ကိုဖွညျ့. တခါတညျး Format ပါပွောငျးပွီးသားလိုခငျြရငျ Automatically Convert to ဆိုတဲ့နရောမှာအမှနျခွဈပွီး ကိုယျပွောငျးခငျြတဲ့ Format ကိုရှေး.. Download Button ကိုနှိပျပေးလိုကျရငျရပါပွီ..
2. Setup နဲ့ Install လုပျပွီးကီးတောငျးလာရငျ ကီးဂငျြကို ဖှငျ့ပွီး Generate လုပျရလာတဲ့ကီးကိုဖွညျ့.. နာမညျနရောမှာ ကွိုကျတဲ့နာမညျဖွညျ့.. Activate လုပျလိုကျရငျ ၃၉.၉၉ ဒျေါလာတနျကို အလကားသုံးနိုငျပါပွီ...
Allavsoft supports adding multiple video URLs and batch downloading and converting multiple videos atatime.When download web video files, this wonderful Video Downloader will automatically detects advertisements and does not download them.
Download Allavsoft Video Downloader Converter v3.15.3.6527.zip : 30.95 MB
Computer software, Converter, Downloader, PC Downloader
Computer software Converter Downloader PC Downloader